Ahoana ny fomba maharitra amin'ny varotra nefa tsy manala ny fitarihanao | Martech Zone
Ahoana ny fomba maharitra amin'ny varotra nefa tsy manala ny fitarihanao
Alatsinainy 21 Febroary 2022 Alatsinainy 21 Febroary 2022 Samir Sampat
Ny fotoana dia ny zava-drehetra amin'ny raharaham-barotra. Mety ho ny fahasamihafana misy eo amin'ny mpanjifa vaovao iray sy ny fanantonana azy.
Tsy ampoizina fa ho tonga mpitarika varotra ianao amin'ny andrana antso an-tariby voalohany nataonao. Mety mila andrana vitsivitsy izany araka ny voalazan'ny fikarohana sasany afaka mandray hatramin'ny 18 antso alohan'ny hahatongavanao voalohany amin'ny telefaona. Mazava ho azy fa miankina amin'ny fari-piainana sy toe-javatra maro izany, saingy ohatra iray amin'ny antony mety hanahirana ny orinasa ny fifehezana ny fizotran'ny fizahana varotra.
Ato amin'ity lahatsoratra ity, hojerentsika ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny fanaovana antso amin'ny varotra amin'ny fitarihana, ary ny zava-dehibe kokoa, ny fanaovana antso an-tariby izay mitarika amin'ny fiovam-po mpanjifa vaovao. Na dia hanana paikadin'ny fikaonan-doha hafa kely aza ny orinasa tsirairay, dia misy toro-hevitra sy fomba fanao tsara indrindra afaka manampy anao sy ny orinasanao eny an-dalana handray fanapahan-kevitra tsara kokoa.
Alohan'ny handinihantsika lalindalina kokoa an'izany, andeha hojerentsika haingana ny toetry ny varotra, midina amin'ny isa.
Ny antontan'isa momba ny varotra indray mandeha
Araka ny HubSpot ary Spotio:
Ny 40% amin'ireo matihanina amin'ny varotra rehetra dia milaza fa ny fitadiavana no ampahany sarotra indrindra amin'ny asany
Amin'izao fotoana izao, 3% amin'ny mpanjifa rehetra ihany no matoky ny solontenan'ny varotra
Ny 80% amin'ny varotra dia mitaky farafaharatsiny dimy antso fanaraha-maso, raha toa ka hatramin'ny 44% ny mpiasan'ny varotra no miala aorian'ny fanaraha-maso tokana (antso roa)
Ny mpividy dia mitatitra fa mety hanaiky ny antso momba ny varotra raha toa ka natao tamin'ny fotoana nifanarahana teo aloha
Afaka maka betsaka araka izay azo atao 18 dia miantso hifandray amin'ny mpanjifa mety
Mety hampisavoritaka ny raharaha momba ny fiantsoana varotra amin'ny fitarihana. Na izany aza, manampy amin'ny fahazoana ny toerana misy ny zava-drehetra izany mba hahafantaranao ny fomba handrosoana mba hahazoana fahombiazana amin'ny orinasanao. Ary amin'ny famaliana ny fanontaniana hoe hafiriana ny fiandrasana eo anelanelan'ny antso, dia ho afaka hahita ny fifandanjana marefo ianao amin'ny fikirizana tsy manelingelina ny fivarotanao.
Betsaka ihany koa ny angon-drakitra azo alaina any izay afaka manampy amin'ny fitarihana ny paikadin'ny fanentananao.
Ankehitriny, andeha isika hiresaka momba ny fivarotana varotra sy ny fanaovana antso amin'ny varotra.
Manao ny Sales Call
Rehefa manao ny antso momba ny varotra voalohany ianao, dia te ho vonona tanteraka amin'izay mety ho vokatry ny antso. Aoka ho vonona ny handray ny antso hovalian'ny mpitarika anao sy hanaterana ny tononao tahaka ny hamelanao hafatra sy hanandrana azy ireo indray any aoriana. Ary izany no fanontaniana an-tapitrisa dolara—firy aoriana?
Ny mpitarika sy ny mpanjifa tsirairay dia tsy mitovy, toy ny mahazatra amin'ny zavatra hafa rehetra eo amin'ny fiainana. Na izany aza, rehefa manao ny antso amin'ny varotra voalohany ianao dia te-hahazo antoka fa vonona ny hanokatra ny varavarana amin'ny fifandraisana vaovao sy ny mety ho mpanjifa vaovao ianao. Matetika loatra, ny solontenan'ny varotra dia mandeha avy hatrany mankany amin'ny famaranana, izay mahatonga azy ireo hikatona haingana alohan'ny hahafantaran'ny mpiantso fa amidy izy ireo.
Raha toa ka tsy mamaly ny antsonao ny mpitarika iray dia tokony hamela mailaka mahafinaritra nefa amin'ny antsipiriany ianao raha misy safidy hanaovana izany. Asao izy ireo hiantso anao amin'ny laharana tsara indrindra hanatonana anao na hanoro azy ireo fa ho faly ianao hifandray amin'ny fotoana mety aminy. Amin'izany fomba izany, omenao ny safidinao amin'ny fitarihana anao sy ny fahatsapana mifehy ny toe-javatra. Olona maro no hanova ny fanapahan-keviny amin'ny alàlan'ny fanolorana safidy handray antso amin'ny daty sy fotoana voatondro.
Fanaraha-maso amin'ny fanaterana araka ny antenaina
Na dia manantena valiny voalohany amin'ny fanadihadiana avy amin'ny orinasa iray ao anatin'ny 10 minitra na latsaka aza ny ankamaroan'ny mpanjifa, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, dia manome fahafaham-po kokoa izy ireo rehefa mifandray sy fifandraisana mitohy. Manoro hevitra ny manam-pahaizana momba ny fampandrosoana ara-barotra fa tokony hamela izany ianao 48 ora rehefa avy miantso mpitarika ianao alohan'ny hanatonanao azy ireo indray. Izany dia manome antoka fa namela fotoana ho an'ny fandaharam-potoanany sahirana ianao nefa tsy manelingelina na kivy. Izy io koa dia manome fotoana ho an'ny mpitarika anao handinihana ny vokatrao na serivisinao ary na zavatra tadiaviny na ilainy izany.
Azonao atao ihany koa ny mampahafantatra ny prospects fa afaka izy ireo manatona anao ary afaka manao izany amin'ny alalan'ny fantsona maromaro izy ireo. Izany dia mamela azy ireo hisafidy ny fantsona izay ahazoany aina indrindra ary mety hampitombo ny fahafahanao hahazo valiny miverina. Ary raha tsy nifandray manokana ianao na nangatahana hamerina antso avy hatrany, aza miantso indroa amin'ny andro iray ihany. Mamela tsiron-dratsy fotsiny eo amin’ny vavan’ny firaka izany satria matetika no mipoitra ho manesika sy kivy loatra.
Ny fifandanjana falifaly dia toa eo anelanelan'ny 24 sy 48 ora ho an'ny antso fanaraha-maso faharoa sy manaraka. Ohatra, raha efa niantso in-droa ianao tamin'ity herinandro ity, dia azonao atao ny mieritreritra ny hiandry amin'ny herinandro ho avy amin'ny fanandramana antso hafa. Mazava ho azy fa fihetsika mampifandanja tsara eto izany ary tsy maintsy hitanao izay mety aminao sy ny orinasanao. Amin'ny alàlan'ny fanisana ny fandehan'ny antso fanaraha-maso dia matetika ianao no mahazo hevitra tsara kokoa momba izay mety indrindra ho an'ny ekipanao.
Mazava ho azy, fomba iray hahazoana antoka izany rehetra izany Ny antso amin'ny varotra dia atao (ary voaray) ara-potoana dia ny famelana olon-kafa mitantana ny asa ho anao sy ny ekipanao. Ny Outsourcing dia manome anao safidy hanana ekipa matihanina eo anilanao izay mahatakatra ny zava-drehetra miaraka amin'ny fanaovana antso an-tariby fanaraha-maso mahomby, antso fanohanana ary maro hafa mba hitazonana ny orinasanao. Raha manapa-kevitra ianao fa aleonao mamela ny antso miverina amin'olon-kafa raha mifantoka amin'ny mpanjifanao ianao, izany dia hiantoka fa ny antso rehetra dia averina amin'ny fotoana mety sy miaraka amin'ny vokatra tsara indrindra.
Momba an'i Smith.ai
Smith.ai manao antso amin'ny anaranao ny masoivoho, manatsara ny mpiasanao haingana amin'ny fitarihana sy tsy mavesatra entana izay mila manatona mpanjifa. Izy ireo dia hiantso ireo mpitarika an-tserasera izay mameno ny taratasin-tranonkala, hifandray amin'ireo mpamatsy vola amin'ny fanavaozana ny fanomezana, hanenjika ny fandoavam-bola amin'ny faktiora tsy voaloa, sy ny maro hafa. Mandefa mailaka sy lahatsoratra manaraka mihitsy aza izy ireo aorian'ny antso rehetra mba hahazoana antoka fa misy fifandraisana.
Fanaraha-maso haingana kokoa rehefa Smith.ai Ireo masoivoho virtoaly dia miasa ho ekipan'ny fanentanana anao:
Mianara bebe kokoa momba ny Smith.ai
Tags: aifahaizana artifisialyhubspotfanentananaantso varotraantontan'isa antso an-tsenaantontan'isa antso momba ny varotrafanaraha-maso ny varotravarotra varotrasmith.aispotioantso virtoalympanampy virtoaly mivoakampanampy amin'ny feo
Samir Sampat dia mpiara-miasa amin'ny varotra sy hetsika Smith.ai. Ireo mpandray vahiny virtoaly 24/7 an'i Smith.ai sy ireo mpiasan'ny chat mivantana dia maka sy mamadika fitarihana amin'ny alàlan'ny telefaona, chat amin'ny tranokala, lahatsoratra ary Facebook. Azonao atao ny manaraka an'i Smith.ai ao amin'ny Twitter, Facebook, LinkedIn ary YouTube.
Ny fomba mora indrindra hanalefahana ny Shopify CSS izay namboarina tamin'ny alàlan'ny fiovaovan'ny rano
Adobe Creative Cloud Express: Modely tsara tarehy ho an'ny atiny amin'ny haino aman-jery sosialy, logos, ary maro hafa